रास्ट्रिय खबर – Page3– shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर (page 3)	रास्ट्रिय खबर	संविधान संशोधन प्रस्ताव जुनसुकै हालतमा असफल पार्छौं: रावल
281 Views १ माघ, वालिङ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले सदनमा टेबल गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा सफल नहुने दाबी गरेका छन् ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति स्याङ्जाद्वारा आयोजित संविधानको कार्यान्वयनमा जनपरिचालन अभियानलाई वालिङमा सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष रावलले मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले अगाडि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान झनै खतरनाक भएको बताए ।
‘संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने कुरा आफैँमा प्रस्ट छैन, उनले भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालको राष्ट्रिय हितमा नभई बाह्य शक्तिको दबाबमा आएकाले संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुन दिन्नौँ ।’
सरकारले अहिले संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने बेलामा उदासीनता देखाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेर बेमौसमको बाजा बजाएको नेता रावलको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिई संविधान संशोधनको कुरा उठाएर देशमाथि घात गरेको छ, उनले भने । रासस
पाँच लाख रुपैयाँ दाइजो नपाएपछि श्रीमतीको हत्या !
234 Views १ माघ काठमाडौं । रौतहट महेशपुरका सन्तोषकुमार साहले पाँच लाख रुपैयाँ दइजो नपाएको निहुँमा श्रीमती लालमुनी कुमारीको हत्या गरेको लालमुनीका माइती पक्षले आरोप लगाएका छन् ।
सन्तोष र उनको परिवारले पटक-पटक पाँच लाख रुपैयाँ दाइजो मागेको तर दिन नसकेपछि मार्ने धम्की दिने गरेको लालमुनीका दाइ जयप्रकाशले बताए ।
दाइजोकै निहुँमा बहिनालाई पटकपटक यातना दिने गरेको जयप्रकाशले दाबी गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बहिनीको बिहेमा उनीहरुले १० लाख रुपैयाँ दाइजो दिएका थिए ।
लालमुनीका माइती पक्षले हत्याका किटानी दिएपछि ससुरा राजेन्द्र साहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सन्तोष भने फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख यज्ञविनोद पोखरेलले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री महरा भन्छन्ः सुन तस्करीमा म त भुरा माछा हुँ
355 Views १ माघ काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करीमा ठूला माछाहरु रहेको र आफूहरुचाहिँ भुरामात्रै भएको बताएका छन्।
‘केही दिनअघिको सुन तस्करीबारे कुरा आ’छ, सुन्नभा होला’ महराले भने, ‘मेरो नामै सुन तस्करीमा जोडेर आछ। जुन सुन तस्करी अहिले मैले सबै डिटेलमा भन्न चाहदिनँ, धेरै ठूला माछाहरु छन् यसमा। त्यो समय क्रममा बाहिर आउँछ। हामी त भुरेभारेमात्र हौं।’ आजको अन्नपूर्ण पेस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
तस्करी गरी ल्याइएको १५ करोड रुपैयाँ मूल्यको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुस २१ गते भेटिएको थियो। सुनका भरिया गोपाल शाहीसहित उक्त सुन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको थियो। शाहीले यसअघिसमेत गरी १ सय किलो सुन अवैध रुपमा भित्र्याएको बयान प्रहरीलाई दिइसकेका छन्।
संगठित अपराध र त्यस्तो अपराधको आर्जन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तक्रियामा अर्थमन्त्री महराले उक्त प्रसंग उप्काएका हुन्।
देउवा र प्रचण्ड भारतीय षडयन्त्रमा फसेको कांग्रेस नेता भण्डारीको आरोप दुई कांग्रेस सांसदले भने-संसदमा मतदान भए पार्टी हृवीप मान्दैनौं
348 Views २९ पुस, कपिलवस्तु । कांग्रेस सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय षडयन्त्रमा फसेको आरोप लगाएका छन् ।
कपिलवस्तुको बाँडगंगामा शुक्रबार ५ नम्बर प्रदेश विभाजन प्रयासविरुद्ध आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले लुम्बिनीमा दिल्ली र बिहारले आँखा लगाएको टिप्पणी गरे ।
भण्डारीले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्न दिल्ली र बिहारले षडयन्त्र गरेको र त्यसमा देउवा तथा प्रचण्ड परेको आरोप लगाए । कांग्रेसले प्रदेश विभाजन गर्ने कुनै निर्णय नगरेकाले आफूलाई हृवीप लागु नहुने दावी समेत भण्डारीले गरे ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने- पार्टीले ५ नम्बर प्रदेशमा पहाड र तराई अलग गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।यस्तो अवस्थामा बिधेयकको पक्षमा मतदान गर्न मलाई हृवीप लाग्दैन ।
उनले पार्टीभन्दा ठूलो राष्ट्रियता नभएको भन्दै पार्टीको हृविपलाई नाघेर संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी पनि दिए । भण्डारीले ५ नम्बर प्रदेशबाट तराई पहाड अलग गर्ने हो भने त्यसअघि कैलाली र कन्चनपुरलाई ७ नम्बर प्रदेशबाट अलग गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस रोल्पाका सभापति एवं सांसद अम्मरसिंह पुनले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने निर्णय आफूहरुले नमान्ने बताए । उनले पाँच नम्बर बिभाजन गर्नै गरि संसदमा टेबुल भएको संशोधन प्रस्तावमा मत हाल्न पार्टीले हृविप जारी गरेपनि विपक्षमा मतदान गर्ने बताए ।
उनले मगरका नाममा प्रधानमन्त्रीले सोझा साझा मगरहरुलाई फकाउन ललीपप देखाएको आरोप समेत लगाए ।
262 Views भीमदत्तनगर, २९ पुस । कञ्चनपुरको दक्षिण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा युनिट तथा पोस्ट स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय बेल्डाँडी र त्रिभुवनबस्ती पुग्नुभएका नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका क्षेत्रीय प्रमुख समक्ष स्थानीयवासीले भारतीय क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत भए पनि नेपाली पक्ष निकै कमजोर रहेको भन्दै सीमा नाकामा शसस्त्र प्रहरी पोस्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
खुला सीमा नाका भएका कारण विभिन्न अपराध, मानव बेचबिखन, भारतीय बेपाहा प्रवृति सहनुपरेको भन्दै पुर्नवास नगरपालिकाका शङ्कर बोगटीले खुला सिमानाका कारण स्थानीय बजारमा तस्करीसमेत मौलाएको बताउनुभयो ।
अर्का स्थानीयबासी रमेश अर्यालले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवाद हँुदै आएको र सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कम भएको छ भन्नुभयो ।
‘सीमा पिल्लर नेपालतर्फ सार्नेदेखि भारतीय एसएसबिले समय समयमा नेपालीलाई दुःख दिने गरेको छ ।’ अर्यालले भन्नुभयो–“सिमा क्षेत्रको सुरक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन् ।’ एक सय ३१ किलोमिटर क्षेत्र भारतसित सीमा जोडिएको भए पनि भारतले हरेक पाँच किलोमिटरको फरकका ३१ वटा एसएसबी पोस्ट राखेर सीमामा निगरानी बढाएको छ । तर नेपाली पक्षबाट भने सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा मात्रै सुरक्षा पोस्ट छन् ।
पुर्नवासका दानबहादुर सुनारले १०४देखि २०० नम्बर सीमा स्तम्भमा समस्या रहेको र भारतीय पक्षले केही स्थानीवासीको जग्गासमेत कब्जा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सीमा पिल्लर ढलेको प्रति हाम्रो प्रशासन नै बेखबर छ ।’ उहाँले भन्नुभयो–“तत्काल अतिक्रमण रोक्न पहल होस् ।” सीमा विवाद देखिएका क्षेत्रमा भारतीय पक्षसित समन्वय गरेर समाधान खोज्न सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वैद्यनाथ बाहिनीका बाहिनीप्रति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेश श्रेष्ठले त्रिभुवनबस्ती र बेल्डाँडीमा सशस्त्र पोस्ट स्थापना गर्न पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
‘हाम्रो तर्फ दोधारा चादँनी र बेलौरीमा मात्रै सीमा सुरक्षा पोस्ट छ ।’ उहाँले भन्नुभयो–“थप पोस्ट बढाउन माथिल्लो निकायमा पहल हुदँैछ ।” सीमा अतिक्रमणलगायत स्थानीयस्तरमा देखिने समस्याका बारेमा भारतीय पक्षसित पनि समन्वय हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयोे ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विजयराज भट्टले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था सवल बनाउन आफूहरु लागिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार केही प्रहरी युनिट थप गर्नाका साथै स्तरोन्नतिका लागि पनि पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । रासस
संसदमा आयो संघीयतामा तत्काललाई हिमाल-पहाड-तराई जोडेर १४ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव ‘सरकारले संविधानको चुकुल बलियो बनाउनुपर्छ’
627 Views काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजनीतिक निकासका लागि १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ ।
७ प्रदेशको सीमाकंनले दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संघीयतामा तत्काललाई हिमाल–पहाड–तराई जोडेर १४ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
‘नेपाल र नेपाली जनताको छिटो विकासका लागि तत्काललाई प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल पहाड तराई समावेश भएको १४ प्रदेश उपयुक्त भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सांसद सुवालले भने ।
उनले गरेको प्रस्तावअनुसार हिमाल, पहाड र तराई जोडिएर बनेका अहिलेका १४ अञ्चललाई १४ प्रदेश बनाउनु हो । जसले समस्या समाधान हुनसक्छ ।
‘सरकारले संविधानको चुकुल बलियो बनाउनुपर्छ’
फरक प्रसंगमा सांसद सुवालले नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । उनले देशमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न संविधानमा प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
‘घर बनाउँदा हावाहुरी र चोरडाकासँग बच्न र सुरक्षित हुन झ्याल ढोकामा चुकुल पनि राखिन्छ । नेपालको संविधानमा पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ,’ सांसद सुवालले भने- ‘भारतीय शासकले नेपालको संविधानमा भएको चुकुल हटाउन दबाब दिँदै आएको छ । सरकारले नेपालको संविधानमा रहेको चुकुल बलियो नबनाई भएको पनि खुकुलो बनाउँदैछ । त्यसकारण संविधान संशोधन विधेयकमा नेपाली जनताको विरोध भइरहेको हो । सरकारले संविधानको चुकुल कमजोर पार्नुहुँदैन् । र संशोधन विधेयक फिर्ता चुकुल बलियो पार्नुपर्छ । अनिमात्र राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’
560 Views २९ पुस, काठमाडौं । चर्चित चलचित्र ‘छक्का पन्जा’को पाइरेसी गरेको आरोप लागेका युवकले आत्महत्या रेका छन् ।
183 Views २८ पुस, काठमाडौं । दीपक मनाङ्गे नामले चनिएका ‘डन’ राजिब गुरुङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् ।
सांसद खतिवडाले घडी चोरेकै हुन् त ? घडी मालिकको बल्ल आयो बयान
705 Views काठमाडौं, २८ पुस । १४ लाखको ‘घडी चोरी’ प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको कुनै गल्ती नरहेको सम्बन्धित व्यक्तिले जनाएका छन् ।
नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङका छोरा प्रवल गुरुङले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ‘सांसद खतिवडामाथि आफ्नो घडी चोरे’को आरोप लगाइएकामा दुःख व्यक्त गरेका हुन् ।
१४ लाखको घडी मालिक प्रवल गुरुङले भनेका छन्- ‘लाजिम्पाटस्थित र्‍याडिशन होटलको हेल्थ क्लबको चेञ्जिङ रुममा मेरो घडी कसैले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको ट्रयाकसुटमा हालिदिएको र खतिवडाले त्यसबारे थाहा पाउनासाथ मेरा मित्र सीमान्त गुरुङलाई एसएमएस र टेलिफोनमार्फत खबर गर्नुभएको थियो ।’
‘घडी हराएको भोलिपल्ट म कामका सिलसिलामा भारतको मुम्बई गएको र उतै रहेका बेला सीमान्तले घडी भेटिएको जानकारी दिएका थिए’, गुरुङले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘घडी प्रकरणबारे सांसद रामहरि खतिवडालाई लाञ्छना लगाउने गरी सञ्चार माध्ययममा आएका समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्छु ।’
उनले सांसद खतिवडाको आत्मसम्मान तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्न गएको चोटप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । प्रवल गुरुङले सांसद खतिवडालाई सकारात्मक सहयोगका लागि सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।
प्रवलले १४ लाखको घडी आफूलाई भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले दिएको दाबी गरेका छन् ।
हेर्नुस् विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ:
अर्घाखाँची महोत्सवमा ढुंगामुढा, ऊर्जामन्त्रीलाई प्रहरीले जोगायो भाषणै नगरी फर्किए ऊर्जामन्त्री, दुई घाइते
813 Views २८ पुस, अर्घाखाँची । सन्धीखर्कमा विहीबार आयोजित अर्घाखाँची महोत्सवमा आक्रोशित जनसमुदायले मन्त्री जनार्दन शर्मासमेतलाई लक्षित गरी ढुंगा प्रहार गरेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरुलाई प्रहरीले जोगाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा माओवादी नेता डिलाराम आचार्यले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन हुँदैमा केही पनि असर नपर्ने बताएपछि स्थानीयबासीले मञ्चमा ढुंगामुढा सुरु गरेका थिए ।
ढुंगामुढा हुन थालेपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको छ भने महोत्सव उदघाटन कार्यक्रम वीचैमा स्थगित भएको छ ।
भाषणै नगरी फर्किए ऊर्जामन्त्री, दुई घाइते
अर्घाखाँची जिल्लामा बिहीबारदेखि अर्घाखाँची महोत्सव सुरु गरिएको थियो । तर, उदघाटन समारोह भइरहेको माञ्चमै ढुंगा बर्सिएपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा सम्बोधन नै नगरी काठमाडौं फर्किएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डिलाराम आचार्यले ‘देश टुक्रिन भएन, ५ नम्बर प्रदेश टुक्रिँदैमा देश टुक्रिँदैन’ भनेपछि युवाहरुले ढुगांमुढा गरेका हुन् ।
महोत्सव उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर चढेर सन्धीखर्क आएका ऊर्जामन्त्रीले महोत्सवमा मन्तव्य राख्न पाएनन् । उनी त्यसै फर्किए । स्थानीयको ढुंगामुढा र चर्का नारावाजीपछि कार्यक्रम वीचैमा स्थगित भएको छ ।
स्थानीयको नाराबाजी र ढुंगामुढा पछि ऊर्जामन्त्री शर्मालाई प्रहरीले स्कर्टिंग गरेर कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर लगेको थियो ।
माओवादी नेता डिलाराम आचार्यले आफुले बोलेका शब्दहरु फिर्ता लिएको र आफू पनि अर्घाखाँचीबासी भएको भन्दै जिल्लाबासीहरुसँग माफी मागेपछि भीड नियन्त्रणमा आएको छ ।
तर, ढुंगा बर्सिएपछि दुईजना सर्बसाधारण घाइते भएका छन् । डिभर्नाका प्रेम खड्का र किमडाँडाका मानबहादुर भुसाल घाइते भएका हुन् । उनीहरुको जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्कमा उपचार भैरहेको छ ।
जिल्लाको पर्यटन, व्यापार र संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि आयोजना गरिएको महोत्सव चर्को राजनीतिक ध्रुवीकरणको कोपभाजनमा परेको छ ।
विहीबार बिहान प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ५ नम्बर प्रदेशका अर्घाखाँचीबासीहरु सुरुङमार्गबाट प्रदेशको राजधानी पोखरा जाने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
हेर्नुहाेस् सहयोगी बिसीको फेसबुकबाट लिइएको झडपको भिडियो
Page3of 230«12345	»	102030...Last »	Recent Posts